Sida Loo Isticmaalo Linux on Azure, Qeybta II: Faahfaahin dheeraad ah - Iskuulka ITS Tech
Sida Loo Isticmaalo Linux on Azure, Qeybta II: Faahfaahin dheeraad ah
Tani waa kan labaad ee laba-qaybood oo blog ah oo ku saabsan kumbuyuutarka ee Azure. In blog ah Qeybta aan ka hadlay oo ku saabsan dhirta of ku ordaya Linux on Azure. Mashruucaan waxaan aadi doonaa qaar ka mid ah fikradaha muhiimka ah ee aan helay markii aan raadinayay waddooyin kala duwan Linux ee Azure inta lagu gudajiro muddadii hore.
Qaado dheeraad ah
Koorsooyin la xiriira
Linux oo ku yaalla Azure
Linux oo ku saabsan Azure: Ammaanka, Heerarka iyo helitaanka
Arin dabiici ah oo ku saabsan ku ordaya Linux on Azure waa isbeddellada kuxiga Mashiinnada dhijitaalka ah galay xaaladda Azure. Tani waa weedho kale oo si daacad ah iiga yaabisay. Waxaan rajeynayaa in shayada Microsoft ay si buuxda ula shaqeyn doonaan Azure (oo ay sameeyaan) si kastaba ha ahaatee waxaan filayaa in isku-darka Linux uu noqon doono mid aan habooneyn.
Taasi waxay u muuqatay inaysan noqon xaaladda. Waxaa jira aalado Linux ah oo isku xira Azure. Tirooyinkan waxaa lagu tijaabiyay badi Linux. Waxaad bilaabi kartaa, xidhi kartaa xitaa xitaa muujin kartaa kheyraad Linux ah gudaha gudaha Azure. Waxyaabaha ay ka midka yihiin qoraalka boot iyo cabbiraadda fulinta ayaa lagu duubay Azure waxaana laga arki karaa gudaha Gudaha Azure.
Waxaa jira noocyo kala duwan, tusaale ahaan, soo saarid qoraal ah kaas oo u oggolaanaya in qoraallada loo gudbiyo mashiinka farsameysan ee Linux.
Aniga ahaan, miisaaniyadu waa faaiidada ugu muhiimsan ee xisaabinta loo qaybiyey. Xaddidaadda bixinta marka loo baahdo iyo in la bixiyo xaddidaadda marka aan loo baahnayn waa aasaaska aasaasiga ah ee xisaabinta loo qaybiyey. Inkasta oo mishiinnada farsamada ay gabi ahaanba ku dari karaan duullimaadka beerta hanti-beereedka, oo loo qaybiyo xisaabinta qaybta ugu badan ee dib-u-habaynaya habraaca halka ay dilayso baahida loo qabo in la ilaaliyo qalabka iyo barnaamijka si loo xoojiyo. Casure-ku-qabsashada mashiinnada farsamada ee dabiiciga ah ee kor u kaca ama hoos u dhaca aragtida culeyska, jadwalka ama dhismaha qadarin. Awoodgan waa mid la heli karo Mashiinnada Windows iyo Linux sida miisaanka miisaanka. Qodobada miisaaniyadda ee kumbiyuutarka ayaa kashaqeyn kara ama sababtoo ah cabirada aasaasiga ah ee fulinta, tusaale ahaan, miisaanka ama miisaanka xusuusta. Faafinta Linux Azure ayaa soo tebinaysa xogta aasaasiga ah ee fulinta moobiilka mashiinka farsamada ee loo yaqaan 'Azure' iyo ka dibna awoodda autismka Azure waxay u qaadaan kantarool. Qeybta ugu weyn ee tani waa mid toos u ah shaqada culus ee orodka mashiinka farsamada. Mar labaad, sheekada halkan waa in qiyaasaha miisaanka Linux lagu sameeyo isla markaana u shaqeeyo sida miisaska Windows-ka.
Si cad, Mashiinnada dhijitaalka ah qaybta ugu weyn ee qaybaha amniga ee marxaladda. Wixii hore oo Microsoft ah ayaa sii dhigtay oo ku sii waday inuu si adag u adkeeyo ammaanka. Tani ma aha qaar ka mid ah calaamadaha samafalka ee la xariira Microsoft. Alaab-qeybiyeyaasha daruurtu waxay u baahan yihiin nabadgelyo dheeraad ah oo ammaan ah marka loo eego qof kasta oo kale. Dhanka khatarta ah in fasax laga helo dukaanka markaas markaa dukaanka ayaa qaadi doona hargabka laakiin weli waxaa laga yaabaa inuu ku badbaado sababaha macluumaadka uusan ahayn wax muhiim ah. Marka laga hadlo suurtagalka ah in uu jiro duufaan warbixineed oo ku saabsan Azure, markaas Azure ayaa laga yaabaa inuu dhinto. Haddii ay macaamiishu dareemaan in khayraadkooda khatarta ah lagu hayo Azure, ma isticmaali doonaan Azure. Microsoft ayaa si cad u muujisay in aysan u baahnayn Azure.
Waxaa jira laba waji ah oo lagu dabooli karo nabadgelyada gudaha Azure: Amniga oo lagu fuliyay mishiinka iyo amniga ee hoos imaanaya gacantaada. Xakameynta mashiinka ayaa waxay u hoggaansameysaa kooxo badan oo warshadaha ku saabsan. Anigu maaha nin amaan ah, laakiin khatarta nabdoonaanta Azure waxay u muuqataa mid aad ii weyn.
Haddii ay dhacdo in ay jiraan xaqiijin ammaan oo gaar ah oo aad u baahan tahay waxaa jira tallaabo wanaagsan oo Azure leeyahay, ama ugu dhakhsaha badan. Waxaad ka heli kartaa fallaar caqli ah oo ka mid ah xaqiijinta sugnaanta nabdoonaanta Azure ee https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/default.aspx.
Tani waa tallaabo degdeg ah oo laga helayo qayb ka mid ah xaqiijinta joogitaanka Azure ee hadda.
Inkastoo ay jirto tallaabooyinka amniga iyo macluumaadka ee nabadgelyada ee Azure laftiisa, waxaad leedahay dhowr waxyaabood oo amniga ah oo la xidhiidha shaqadaada Linux ee Azure:
Qabso Kooxaha Amniga. Abaabulayaasha Kooxaha Amniga ama NSGs waxay u tagaan sida dameeraha gudaha gudaha nidaamka kombiyuutarada Azure. Heerarka NSG waxay xakameyn karaan dhaqdhaqaaqyada socdaalka iyo dibadda iyada oo la adeegsanayo halka laga helo iyo yoolka muuqaalka cinwaanka iyo dekedda. NSGs waxaa lagu xidhi karaa mashiinnada shakhsi ahaaneed ee shakhsi ahaaneed ama dhammaan qaybaha hoose.
Xeerarka Hogaaminaya. Heerarka hogaaminaya ayaa kuu oggolaanaya inaad waxqabadka koorsada adiga oo gaaraya dhamaadka gaar ahaan diiradda ama cinwaanada marka la eego ilaha, himilada iyo dekadda. Fursadda aad u leedahay inaad leedahay muraayad gaar ah oo gaar ah ama mishiinka dib u eegida aad la'aanteed wax badan oo ka mid ah qalabka farsamada mashiinka farsamada iyo mabaadiida tooska ah ee maareynta dhaqdhaqaaqa iyada oo loo marayo qalabka.
Fur cinwaanka IP. Mashiinnada farsamadu waxay ku sii socdaan nidaamyada dhuumaha. Xaaladda dabcan waa nidaamyada aan la heli karin shabakadda. Cinwaanka furan ee IP ayaa loo baahan yahay si kasta oo ku salaysan shabakada internetka ee ku xiran mashiinka farsamada.
Dhibaatooyinka adag ee isku dhafan. Hadafyada adag ee sanka ah ayaa hadda lagu qori karaa Azure isagoo bixinaya macluumaad wali ah caymis. Codsiyada 'virtual hard drive drive' ayaa isticmaala keydka DM-Crypt waxana la heli karaa taarikada adag (VHDs) ee laga sameeyey Azure ama VHDs kuwaas oo joogay meeshaas oo lagu qoondeeyey laguna guuray Azure.
Waayo, DevOps qolka, robotization iyo repeatability waa muhiim. Nasiib wanaag Microsoft, waxaa jira dardarro horumarineed oo awood u leh labadaba. Azure wuxuu leeyahay taageero deegaan Kiimikada iyo kabaha. Azure Sidoo kale wuxuu leeyahay nidaam gaar ah oo la xiriira robotisis gaar ah kaas oo kaashanaya geedi socodka shaqada ee PowerShell. Qalabka macmiilku wuxuu gaari doonaa Mashiinnada dhijitaalka ah iyada oo loo marayo faleebada qoraalka iyo dejinta gobolka. Isku duub si wadajir ah nidaamka sharaxaadda JSON ee ku saabsan samaynta kheyraadka Azure iyo API-ku salaysan REST oo ah awood kasta oo Casure ah iyo sheeko adag oo loogu talagalay robotization iyo DevOps.
Fursada aad ujoogsatid inaad ku habboonaato inaad la qabsato waxyaabo badan oo ku saabsan geeddi-socodka shaqo ee Linux ee Azure, Aqoonta Caalamiga ah waxay soo uruurisay koorsooyin gaaban oo khaas ah, gaar ahaan diiradda saarnaa Linux oo ku saabsan Azure. Koorasyadu waxay ku xiran yihiin dhibaatooyinka halkii aad ku samayn lahayd adigoo u maraya shay-baara oo xeeladeysan. Koorasyadu waxay ku siinayaan ujeedooyin ballaadhan iyo shaqooyin waxayna kuu oggolaanayaan inaad fuliso qorshe gaar ah. Dhibaatooyinka ayaa ku siinaya caawimo firfircoon sida loo baahdo, laga bilaabo qeexidda qeexidda tilmaamaha iyo tilmaamaha jilicsan ee wax walba oo aad u baahantahay caawinaad dheeraad ah. Waxaad fursad u heleysaa inaad heshid inta gargaar ee aad u baahan tahay, iyo markaad dhamaysid imtixaanka aad u gudbiso maareynta mawduuca mawduuca.